Xisbiga Kulmiye Iyo Guuldarada Ku Soo Socota Iyo Dhohananta Hogankisa | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Xisbiga Kulmiye Iyo Guuldarada Ku Soo Socota Iyo Dhohananta Hogankisa
Sida ka muqata guud ahaan dalka waxa ka jirta abaaro aad u kulul , Oo dhamaan naflaydu ay wada dhadhamiyeen, Cid gaar ah laguma cananan karo, Waa masibo ka mid ah masiboyinka ka Allah, Manta ma jirto nolol ku hadhay miyiga, Markii ay dunyadii ka baxday waxa bilaabmay in uu dadkina ay dhintaan,
Dhinaca magalada marka aan ka eegno waxa jiray dhibatoyin togan kuwi jirayna waxa iyana ku soo biray hormoyin horleh oo ka duwan kuwi layaqaanay. Aan bal ka tilmaano kuwan sixirk, afduub ama caruurto laxado, dadkii miyiga oo ku soo qul qulay magalad. Oo kor u siqaaday heerka shaqo la’anta. Ciyaalo xafadeed goorta habinkii jidgoyoyin dadka u gala oo baadha. Qabyaladiii oo dabarka gosatay Iyo oday malin walba warbahinta tagan oo ka hadlaya reer hebilnimo.
Waxa inagu soo fool leh dorashoyin dhawor ah . Kowna ay ka tahay mida madaxtinimada ee lagu wado in ay qabsonto dabayaqada sanadkan. Tasi oo ay u tartamayaan 3 Xusbi qaran ee dalka ka jira .
Xisbiga Kulmiye ee hatan talada dalka haya oo sida xaqiiqada ah ku milmay dawlada jirta. Shacabkana ku noqaday dawlad aan wax badan laga mahadin . Horeseedyna dhibaatooyib noocyo cusub leh oo aan hore lo aqoonin.
Shacabka gobta ah ee u bahan nolol wanagsan in ay hilaan. Ma muqato in uu xisbiga Kulmiye wax ka qaban karo ama uu maareyin karo arimaha tagan ee la rabo in shacabka wax looga qabto.
Xisbiga Kulmiye muraayad midab leh ayuu ka xidhay . Oo wax ay ku sugan yeen waxba Kalama socdo. Mana garanaayo ma aqoon daribaa mise waa ula kac oo cadawnimo faro badani ay ku dhigan tahay aya ka muqata .
Xisbiga Kulmiye oo ka lita xusbig UDUB ee wax ka soo qabtay xukunka dalka.
Indho laanta haysata xisbiga Kulmiye waxa uu aamin sanyahay in doorashoda sosocota dib loo doorandono. Guud ahaan shacabiga somaliland way ka dharagsanyihiin xadhka ha Iyo qudhun qadhaadhka Iyo dabinada uu dadkisa u maligaayo.
Xisbiga Kulmiye oo malin cad la dawaday macnihisa dhabta ah iyo waxa uu xambarsanyahat %100 waxaan qabaa in aanu mar kale xukunka ku so noqon doonin . Waa haddi u san ku shubasho ku kicin iyo wax isdabo Maris.
Reer Kulmiye wax ay rumaysantihiin in ay malab ay warabiyeen shacabiga . Lakin xaqiqadu waxay tahay in ay sun ku horeen . Wax yeelo uun ay ka dheefeen.
Nin u jeeda inaad u sheegtay waxan jirin oo aan joogin way adkanaysaa in uu mar Kali ku aamino tas wax ka dhigan xisbiga Kulmiye nin kii wax ka suga.
dadwayne reer Somaliland gudo iyo dibadba way la socdaan sida ay wax yihiin. Ee xisbiga Kulmiye uu wax yeelay . Waxa ay Allah ka baryayaa faraj Iyo fursad ay wax dhama ku helaan.
Sida cad marka la gaadho dorashada madax tinimada inuu Kulmiye afka dhulka daridoon sababtidana uu xisbiga Kulmiye uu masul ka yahay. Taasi oo noqonaysa dhaxalkii wixii uu dadka ku maal gashaday.
Hogaanka Kulmiye uma muqato marxalad uu dadka Iyo dalkuba ay ku jiraan. Wax ay u muuqataa in ay yihiin kaysir soo lugay.
Dadku waxa uu kaga duwan yahay noolaha intisa kali waa caqliga .Kasi oo horseeda in uu kugu hago meesha haboon. Hoganka xisbiga Kulmiye waxa ay ku doodayaan Iyo xaqiqada jirtaa waa kala maan.
Waxa ay ahayeed in madaxda xisbigu la socdaan bahida Iyo dhibtada ay qaban shacabku oo waliba ay ka daren qatan wax ka badlka nolosha dhibta badan ee ay ku jiraa isaga oo kaashanaya dawlada ka dhalay xisbigoda.
Hogamiye wax uu yahay waa afafka hore ee xisbiga. Wana meesha uu ka soo burqado fulinta go’amada xisbi.
Sidaa daraded hoganka Kulmiye way ku fashilmeen xal u helida arimo faro badan oo u bahan in wax lagaqabto.
Wax ay ku doodanka intii aanu talada a dalka hoganka u qabanay subaga laga leefay xusulada hadanu mar labaad xukunka noo dhibataana caano Iyo malab ayaa la durduuran doonaa.
Muwadinow wakaa hadana caqaliga Iyo indhahaa Kulmiye. Xisbiga Kulmiye Iyo hogankiduba way ku fashlmin intii ay talada dalka hayeey . Shacabkuna taa waa ka dharagsanyahay.
Guuldarada xisbiga Kulmiye ee doorashoda soo socoto Iyo dhohananta hogankisa waa mid aynu ka markhati kawada noqon doono bilaha soosocda.
Eng /Farhan Ahmed Mahmoud
Denver Colorado ??